Ahlu Sunna oo balan qaad ka heshay Qaramada Midoobay Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Ahlu Sunna oo balan qaad ka heshay Qaramada Midoobay Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolada dhexe ayaa sheegay in uu balan qaad ka helay Qaramada Midoobay kadib markii shalay uu wafdi booqday gobolada dhexe.
Gudoomiye ku xigeenka Golaha fulinta Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh Axmed Ilka case ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyay kulamo ay shalay la qaateen wafdi ka socday QM oo uu hogaaminayay u qaabilsanaha QM ee biniaadanimada Soomaaliya Mark Bowden oo shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb.
Ilka case ayaa waxa uu sheegay in Wafuuda ka socotay Qaramada Midoobay ay u balan qaadeen inay ka gacan siinayaan Maamulka sugida amaanka, tababarida ciidamada iyo dib u dhiska xarumaha Hayadaha kala duwan ee Maamulka Ahlu Sunna ee gobolada dhexe.
Gudoomiye ku xigeenka Golaha fulinta Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu weyn oo ay ka rajeynayaan QM inay wax ka qabato inay ka mid tahay inay quudin u sameyso dadka barakacayaasha ah islamarkaana ay Xarumaheeda ka samaysato deegaanada ay maamulaan Ahlu Sunna ee bartamaha Soomaaliya.
Booqashada Qaramada Midoobay ee gobolada dhexe ee dalka ayaa waxa ay imaaneysaa xili Ahlu Sunna ay horay ugu baaqday QM inay gargaar soo gaarsiiso deegaanada ay ka taliyaan.